Uyenza njani into yokuZenzekelayo yeNtengiso ukuba isebenzele wena | Martech Zone
NgoLwesibini, Juni 17, 2014 NgoLwesibini, Juni 17, 2014 Douglas Karr
Kukho ukudideka okuninzi ngaphambili kwi-intanethi namhlanje malunga nokuba yintoni kanye le ntengiso yokuthengisa. Kubonakala ngathi nayiphi na inkampani ebonisa ukuba ungayithumela njani i-imeyile ngokusekwe kwisiganeko esenziweyo iyazibiza ukuzenzekela ngokuzenzekelayo. Sifundile kumxhasi wethu wentengiso, Ekunene kwi-Interactive, ukuba kukho iimpawu ezibalaseleyo kwinkqubo yentengiso ezenzekelayo ekufuneka wonke umthengisi ayikhangele:
Iinkcukacha -Ukwazi ukuqokelela idatha, nokuba kungenxa yeefom, okanye ngokudityaniswa kwedatha yabathengi kunye nentengiso. Oku kwenza ukuba iinkampani zikwazi ukwahlula ngokufanelekileyo unxibelelwano lwabo kubalo lwabantu, ifemagrafi, ukuthengwa kwembali, kunye nenye idatha ebalulekileyo.
Ukulinganisa -Ukubangela nje umsitho asinto ezenzekelayo, kodwa ukubanakho ukujonga unxibelelwano oluninzi lwenkokeli okanye lomthengi kunye phuhlisa imodeli yokufumana amanqaku ohambisa umthengi kunye nobomi bexesha lobomi yindlela owufumana ngayo umyalezo olungileyo kumamkeli olungileyo ngexesha elifanelekileyo.
Ukuvuza kunye neMiyalezo ebangelwe Ngamanye amaxesha ukuvusa i-imeyile, njengakwimeko yokuthenga inqwelo yokuthenga eshiyekileyo, kusebenza kakuhle. Kodwa ngamanye amaxesha kufuneka udlulise ulwazi oluncedo olukwazisa ithemba lakho de bakulungele ukuthatha isenzo okanye ukuthenga. Intengiso ye-drip ibalulekile, izisa umyalezo kumamkeli xa befuna okanye befuna.
Umdibaniso wentlalo -Abathengi kunye nezikhokelo bayanxibelelana neempawu kusetyenziswa amajelo eendaba ezentlalo, hayi kwindawo yabo kuphela okanye iphepha lokufika. Iqonga lakho lokuzenzekelayo lokuthengisa kufuneka libe nakho ukulinganisa ifuthe lala manqaku achukumisayo.
Ewe ukuchongwa kweendwendwe, amaphepha okufika, i-imeyile kunye nentengiso ephathekayo, ujongano olulula lomsebenzisi zonke izinto ezintle zenkqubo yokuthengisa ezenzekelayo. Khetha iqonga lakho lokuthengisa ngokuzenzekelayo. Sijonge njengoko iinkampani ezininzi zithenga inkqubo etyebileyo ezingazange ziyisebenzise- kodwa zihlawule. Kwaye sibukele ezinye iinkampani zisokola ukuqonda ngokupheleleyo imbuyekezo kwintengiso yazo xa zithenga kuba inkqubo inqongophele. Uninzi lwamaqonga okuzenzekelayo entengiso anqunyelwe ekufumaneni, kwaye akonelanga kugxile kugcino nasekuphuhliseni umthengi.
Kumasebe ezentengiso afuna ukufumana ithuba lokukhuphisana, izixhobo zokuthengisa ezizenzekelayo zibonelela ngamathuba amakhulu. Umzekelo, iinkampani ezityala imali kwintengiso yesoftware ezenzekelayo ziyaqonda ukonga iipesenti ezili-15 kwimisebenzi yabo yoyilo. Ngcono nangakumbi, uninzi lweenkampani ziqala ukuqonda imbuyekezo kutyalo-mali lwazo kwangoko-iipesenti ezingama-44 ziyaqonda i-ROI kwisithuba seenyanga ezintandathu, kwaye iipesenti ezingama-75 zibona i-ROI kungaphelanga nonyaka. Ukwenza konke oku, nangona kunjalo, kufuneka unabantu abafanelekileyo kwindawo.
le Ukuthengisa ngokuzenzekelayo i-infographic evela kwi-Adecco Ngaba unokonakala okukhulu kwezibonelelo kunye neendlela ezilungileyo zokubeka iqonga lakho lokuthengisa elizisebenzisayo.
tags: I-adeccoidatha yomthengiIinkcukachalwabantui-imeyileintengiso yedriphuqinisekisahubspotukukhokela amanqakuukuzenzekela ngokuzenzekelayoekunene kunxibelelwanoukufaka amanqakuisahluloi-imeyile ebangelakubangele ukuthumela